Naas - n'ime Kildare
Naas, bụbu obodo ahịa nwere mgbidi, bụ obodo Kildare. Mpaghara ahụ bara ụba na omenala equine nwere egwuregwu ịgba ọsọ abụọ - Punchestown, ebe obibi nke ịgba ọsọ Irish jump na Naas, nke na-agbakọ ma ịgba ọsọ ewepụghị na ịchụ nta; Goffs Bloodstock Sales na ọtụtụ ugbo stud. Nwee obi ụtọ njem ntụrụndụ n'akụkụ Grand Canal yana njegharị ndị na-apụ na Sallins, na-atọ ụtọ nke ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ebe a na-eri nri na mpaghara ahụ ma ọ bụ maka ndị na-anụ ọkụ n'obi moto, nweta ihe niile Mondello nwere inye.
Ebe nlegharị anya kacha mma na Naas
Ezigbo ezinụlọ nwere obi ụtọ iri nri na-ele Grand Canal.
Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ememme Punchestown
Chọpụta ihe ndị ọzọ na Naas
Arts & OmenalaCommunity
Kwado Mpagharaụlọ oriri na ọṅụṅụ
Cafés okirikiriPubs & Ndụ abalịỤlọ ahịa Gastro-Pub
Ihe nketa na akụkọ ihe mere emeKwado Mpaghara
Adventure & IheNwee ezumike ezinụlọCafes
OutdoorsUseslọ & Ubi
Arts & OmenalaNwee ezumike ezinụlọ